ဒီဆော့ဖ်ဝဲလ်လေးက ဖိုင်တွေကို စနစ်တကျပြန်ပြီး စီပေးတာပါ .. ကွန်ပျူတာ အရမ်းကြာ နေတယ် .. hung နေတတ်တယ်ဆိုတာ ဖိုင်တွေ စနစ်တကျမရှိမှုလဲ တစ်ခု အပါအ၀င်ပါ ....... သူ့ကို run ထားမယ်ဆိုရင် တစ်ခြား program တွေကို လုပ်ဆောင်ထားရင် ပိတ်ထားလိုက်ပါ .. အကောင်းဆုံးက ကွန်ပျူတာ သုံးစွဲခြင်းကို မလုပ်ပါနဲ့ ခဏ ရပ်ထားလိုက်ပါ . အထူးသဖြင့် network လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းထားပြီးမှ လုပ်ပါ ... ကျွန်တော် ဒီကောင်လေးကိုပဲ သုံးနေတာပါ . သုံးဖို့လဲ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ် . တစ်ပတ်ကို တစ်ကြိမ်လောက်တော့ ဖိုင်ပြန်စီပါ . ကျွန်တော်တို့ကအနေနဲ့ ဖိုင်ပြန်စီတာကို မပျင်းပါနဲ့ . တစ်ပိုင်းကို 20 MB စီပဲရှိပါတယ် . သေးသေးလေးတွေခွဲပေးထားတာမဟုတ်ပါ . မြန်မာပြည်က လူတွေ အဆင်ပြေအောင်လို့ သက်သက် အပင်ပန်းခံထားရတာပါ . speed ကောင်းတဲ့သူများ download လုပ်နိုင်ဖို့လဲ တင်ပေးထားပါတယ် .
Download ifile.it ၊ >> Part-1 ၊ Part-2 ၊ Part-3 ၊ Part-4
Download mediafire ၊ Download nyinaymin.net
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 5:35 AM